Linux webhu inobata. Nei ichiri sarudzo yakanakisa | Linux Vakapindwa muropa
Linux webhu inobata. Nei ichiri chakanyanya kunaka sarudzo
Diego ChiGerman Gonzalez | | Linux vs. Windows
Imwe yesarudzo dzisina musoro dzinogona kuitwa maererano nehurongwa hwekuvapo pamhepo ndeye lkufunga kuti masocial network anotsiva yako webhusaiti. Icho chinhu chakadai sekufunga kuti iwe unogona hove chete nechirauro uye chirauro. Networks dzinotibvumidza kukwezva vatengi, asi kana tisina nzira yekudzichengeta (dzinodzorwa nesu) lnetwork dzinogona kuitora kudivi iro rinoisa mari yakawanda mukushambadzira.
1 Chii chinonzi webhu kubata?
1.1 Mhando dzewebhu kubata.
2 Linux webhu inobata. Nei ichiri chakanyanya kunaka sarudzo.
Chii chinonzi webhu kubata?
Kunyangwe zvichinyatso kugona kuve newebhusaiti pane chero komputa yemumba ine Internet kuwana, Kune imwe nyaya yemitengo uye mabhenefiti, zvakanakisa kushandisa sevhisi yewebhu inomiririra mupi. Iye mupi anotarisira chengeta maseva (makomputa panowanikwa nzvimbo) uye anomhanya mukuwedzera mukupa mamwe masevhisi sekumisikidzwa kwesoftware kunodiwa kuti mashandiro emasaiti abudiswe, kunyoreswa kwenzvimbo uye kuwana zvitupa zvechokwadi.
Ikozvino, kuti kusarudza yakanakisa webhu yekutambira yakakosha, sezvo akanakisa akagadzirwa emasaiti haabatsire kana vashanyi vasingakwanise kupinda nekuti server server yanga isiri kusvika par.
Munyika yakanaka ndinogona kungogumira pakutaura kuti zvakanakisa kutsvaga mugadziri anovimbwa uye rega iye atore danho pane chaipo chakapihwa. Muhupenyu chaihwo, Mazhinji mabhizinesi haakwanise kuhaya mugadziri kuti agadzire mhinduro kubva pakutanga uye anofanirwa kugadzirisa yakagadzirira-yakagadzirwa. Pamusoro pezvo, kupihwa kwevanopa akasiyana kwakaparadzaniswa zvekuti zvinonetsa kuenzanisa.
Mhando dzewebhu kubata.
Vazhinji vanopa webhu vanopa varikukurudzira "turnkey" mhinduro. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kukwereta chirongwa nechitoro chepamhepo kana bhurogu yakatogadzirwa. Izvi zvine mukana wekuti te inochengetedza nguva uye mutengo, asi mukudzoka iwe unorasikirwa nekuchinjika. Chero zvazvingaitika, ichiri mhinduro yakanaka kune avo vari kuisa yavo yepamhepo.
Kunze kwemhinduro idzi, mamwe marudzi ekubatisa webhu ndeaya:
Kugoverana kugovana: Ndiyo yakachipa pane ese masevhisi erudzi urwu, izvo zvinoita kuti ive yakanaka kune mawebhusaiti ane kushanya kushoma. Iye mupi anogovera zviwanikwa zve server pakati pevatengi vayo vakasiyana.
Virtual yakavanzika server. Kuenda kubva kune yakagovaniswa yekutambira kune chaiyo yakavanzika server yakafanana nekubuda kubva muhotera kamuri kuenda kuimba. Nheyo yacho yakafanana. Musiyano uyu ndewekuti mupi anogovera zviwanikwa zvevavhavha pakati pevashoma vatengi uye kune zvimwe zvingamisike mikana. Izvo zvakanaka kune masosi ari kutanga kukura.
Dedicated server: Kuenderera mberi nekufananidza, izvi zvingaite sekuhaya imba. Zvese server zviwanikwa zvinopihwa kune mumwe mushandisi anozove akazara tekinoroji kutonga pamusoro pekugadziriswa uye software. Iko kushanda kwewebhusaiti kunongogumira chete nenhamba yenzvimbo idzo kontrakta afunga kuisa. Iyi sarudzo yakanakisa yemasaiti makuru
Cloud Hosting: Iyi mhando yekutambira inokutendera iwe kuhaya zviwanikwa zvemubati wekutora iwe waunoda, pane imwe nguva. Ngatitii iwe une webhusaiti webhusaiti yekambani yemarudzi akawanda uye nekuda kwedenda raunoda kuita musangano wepamhepo nevatengi vako vese. Haisi chinhu chaunoshandisa mazuva ese. Zvakare, kubva padanho rekumisikidza rako rebasa regore, iwe unohaya imwe sevha uye nekuisa yako yaunoda videoconferencing mhinduro. Paunopedza kuishandisa, unongobvisa sevha
Linux webhu inobata. Nei ichiri chakanyanya kunaka sarudzo.
Ndine urombo nekujeka kuri kutevera. Windows webhu kuronga zvirongwa inoshandisa iyo server vhezheni yeWindows inoshanda sisitimu. Zvinoreva kubhadhara rezinesi. Uye, neimwe nzira kana imwe, iyo inomiririra inopa inopa mutengo kune avo vatengi vayo.
Iyo yakanaka sarudzo kana Zvekugadzirwa kwewebsite yako unoshandisa Microsoft matekinoroji kana imwe mhinduro yekudyara yezviri mukati manejimendi kana zvitoro zvine iwo izvo zvavanoda.
Zvisinei, ramba uchifunga izvozvo Nhasi uno mazhinji matekinoroji anoshandiswa kwewebhusaiti manejimendi akavhurwa sosi uye inoenderana neLinux, saka kubhadhara rezinesi irori kunoita sekusina chikonzero.
Kunyangwe kupihwa kwacho kuchisiyana, kunyanya muzvirongwa zvinodhura, vazhinji vanogamuchira vanopa vanoita kunge vanofarira kushandisa CentOS senzira yavo yekushandisa. CentOS yakasununguka uye inovandudzwa nharaunda, kunyange ichitsigirwa neRed Hat.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Linux webhu inobata. Nei ichiri chakanyanya kunaka sarudzo
Camilo Bernal akadaro
Chinyorwa chakanaka. Zvingave zvakanaka kunyora imwe inotsanangura mikana yezvidiki uye zviri pakati nepakati mabhizinesi (maSME). Iwo mahombe ane huwandu hwakawanda hwesarudzo, asi maSME anowanzo kuve anozvininipisa (zvakanyanya muLatin America) uye vanomanikidzwa kuenda kune yakachipa, inokurumidza uye inoshanda zvakanyanya. Mazhinji emakambani aya haatombo kwanisa kuhaya injinjini imwechete. Ini ndashanda mune akati wandei emakambani aya, uye ndakavakurudzira kuti vashandise Mahara Software kusevha chimwe chinhu, nekuti ndakaona kuti vaisungirwa kusvina mari yega yega.
Pindura kuna Camilo Bernal
Ndatenda nezano renyu.
Carlos Davalillo mugadziri wemufananidzo akadaro
Kwaziso, yakanaka kwazvo chinyorwa. Chingavewo chakanaka chinyorwa chinotaura zvishoma nezve maitiro ekuyera kuwanda kwevashanyi kune webhusaiti yedu uye hunhu hwayo pasina kupokana nekuremekedza rusununguko rwemushandisi.
Pindura Carlos Davalillo
Linux kugoverwa kwemaseva. Dzimwe sarudzo
Ubuntu Studio ine KDE Plasma. Nyeredzi Inozvarwa